Saciid Oo Aan La Yeelanay Waraysi Xiso Badan Oo Dhinacyo Badan Taabanayo | HOYGA ISKU XIRKA DHALINYARADA DABAQIINKA
Waraysiga Qeebtiisii 1aad
Waraysigaasi aya waxa uu dhacay sida tan, Waxa uu marka hore kubilaawday Saciid hadalkiisa salaan uu udiray Dhamaan Dhalinyarada Xaafada Dabaqiin meelkasta oo ay joogaan, gaar ahaan ragii ay qaaska iskugu dheraayeen sida Cumar*Gacamey*, Cabdinaasir*Talaata* , Xassan bashiir iyo Cumar ibraahim.
Geedi: Salan kadib Saciid Cabduqaadir Mire ayaan waxa aan waydiiyay xiliigi uu wadanka Somaliya gaar ahaan Magalada Muqdisho-Dagmada Yaqshiid-Xaafada Dabaqiin uu katagay ?
Dalxa : waxa ay aheed 19/01/2008 malino sabti ah anigoo uduulay xaga iyo cariga Asia, gaar ahaan pakistaan–Islamabaad.
Geedi: waxyaabaha aa utagtay maxay ahayeen wadanka pakistaan ? Dalxa: waxa aan utagay waxa ay ahayeen arimo Waxbarasho aan daneenayay.
Geedi: wax aan weydiiyay inuu nooga sheego foculty uu baranaayay iyo Jamacada uu ka baranaayay magaceeda ?
Dalxa: waxa ay aheed Foculty aan baranaayay Telcom Engineering oo aan aad u jeclaay xiligii aan ku guda jiray dugsiga sare, Jamacada aan ka barto magaceeda waa IQRA UNIVERSTY.
Geedi: waxaan kaloo waydiiyay Dhalinyarada Xaafada Dabaqiin ee ku noolay wadankisi aad mesha ugu tagtay meeqa ay ka koobnaayeen? Intisa ku kala nool yihiin?
Dalxa: Waxay ay yihiin ilaa 3qofood wax aan ugu tagay nin layiraahdo Qalar Islamabad oo aan wada daganeeyn aana isku aragnay Jmacada uu wax ka baranaayay ee layiraahdo Jamaca Islamka , Waxaan kaloo aan is aragnay Ibraahin Shiino aanu ku kulnay Islamabaad asagoo fasax kuyimid kana yimid lahore oo uu daganyahay waxna ka barto, waxa kaloo aan kula kulmay Cabdiqaadir Tarabi oo dhalinyarada xaafada dabaqiin ka mid ah xili aan kuwada sugneen Zoo oo ah meelaha xayaawanada lagu keediyo, loona dawasha tago ee ugu way Pakistaan ayna aheed xili fasaxa oo uu soo gaaray casimada Islamabaad asagoo dagana waxna ka barta Gobolka karagi.
Muqaalkani waa Cabdiqaadir*Tarabu* iyo Saciido Kuwada Sugan Zoo Islamabad
Muqaalkani waa xiliyadii uu la kulmay Ibraahin-Shiino PK-Islamabad
Geeedi: waxan kaloo waydiiyay waxyaaba ay bartaan dhalinyaradaasi ?
Dalxa: Waxaysa kala bartaan Cabduqaadir iyo Qalar waxay bartaan madooyinka artiska ah, Ibraahin-shiino waxa uu barta Civil Engineering, Inkastoo aan umaleena inuu Qalar hatan igula sugan yahay wadanka kenya uuna soo dhameestay Jamacada.
Geedi: Marka aan ugada galno dhanka shaqsiyadaada ayadoo aan wax ka waydiin doon qayba kala duwan, wax manooga sheegi karta wax yaabihii kuugu yaanka badnaay ee aa kala kulantid wadanka pakistaan intii aa kusugneed?
Dalxa: waxa aa igu yaabka badeen waxa y aheed xili aan joogay Gobolka Peshawar oo aan fasax ku jiray aana raacay Tabliiq ayadoo aan ognahay inuu caan ku yahay Tabliiqa wadankaasi, Aya waxa dhacday anigoo lascdo Jamaaco ka timid Islamabad markii aan ku dagnay meel masjida ah Jamiicadii kale ee nagu soo dhawaysay mesha waxa ay ku dheheen waa kuma qofkaan madoow, Markasi ay dhaheen waa walaalken hada Diinta kusoo biiray ana aad ayaan uyaabay wayo waxa ay kuwada hadlayeen afka Urduga oo ay isku yiraahdeen sida tan ( koonse yee kela ? ) waxay ugu jawaabeen sida tan (Tumara baayina Muslim daqal kar tiyu ) waxana ahaay qof garanaay waxa ay kuwada hadlyaan xiligaas.
Geedi: waxa kaloo an wax ka waydiiya inuu wax nooga sheega wax isku imaada oo ah munaasabad ama xaflad dhalinyaro ku qalan jibinayso, ama kulan Dhalinyarada Xaafada Dabaqiin ah?
Delxa: Inkastoo aan ku yareen hada nahay Dhalinyarada Xaafada Dabaqiin hadana la isma mogeen, waxa kaloo aan ka qeeb qatay kulan munaasaba oo ahayd sanad guuradii xoranimada wadanka Somaliya ee 1da luuliyo ilaa 2mar oo kala ah 01/06/2008 iyo 01/06/2009, waxa kaloo aan ka qeeb qatay xaflada fara badan oo ah qalin jabin oo aan inta badan uga qeeb galay gobilka Lahor.
Geedi: waxa kaloo an waydiiyay goorma ay aheed xiligii kugu horeesay ee aad dheeshid ama ka qeeb qadatay cayaar k/cagta ah xiligii aa kusugneed Pk?
Dalxa: wax ay aheed anigoo jooga 2 malin joogo wadanka pk, waxa aana kulankaasi iskaga hor yimaaday xafada aan ku soo dagay oo la yiraahdo F10 iyo G10 ee somalida u badan tahay, Geemkasi oo ahaay geem aad u xiisa badan inkastoo aan aniga ay igu cusbeed hawada wadanka waxa ay guusha nagu raacday 3-1 .
Geedi: waxa aan wax ka waydiiyay xiligii uu Pakistan kasoo tagay, mesha uu kusoo dagay, waxa uu uga soo tagay iyo wax barashada mesha ay u maraysay ?
Dalxa: waxa aan kasoo tagay 14/12/2009 anoo jamacada soo xirtay, waxa aan kasoo dagay 15/12/2009ka INTEBA AIRPORT ee wadanka Uganda, waxa aan uga soo tagay arimo Familka laxariira ayadoo aan dib usii wadan doono wax barshadeeda Hadii ALLAH uu idmo, Waxa ay wax barashadeeda ii mareesay 1sano iyo Bar oo aan baranaayay Telcom Engineering.
Geedi: Dhanka kale waxa aan wax ka weydiiyay dhanka nolosha Africa iyo asia waxa ay ku kala duwan yihiin, marka aa is bar-bar dhigtid Nairbi oo aad hada joogtid ama Kanpalla oo aad soo martay mudana joogtay iyo Islamabaad oo waqti aa ku qaadatay ?
Dalxa: Waxyaalo fara badan waa ay ku kala duwan yihiin sida nadaafada wadooyinka waa ween iyo maciishada waayo africa dhanka wadooyinka waa laga hormar san yahay, dhanka maciishada waa laga jaban yahay, Waxa ay africa intaan ka tagay ay uga fiican tahay dhanka cimilada hawada.
Waan idin soo bandhigi doona waraysiga Qeebtiisa 2aad mardhaw, waraysigoo aad udheer awgeed ee LA SOCO QEEBTA 2AA……
W/Q: Cabdishakuur Faarax Cigale*Geedi*
E-mail: shakuuryarenew@hotmail.com Nairobi-Kenya-Islii.
Laxariir dabaqiin@gmail.com ama dabaqiin@email.com
« Waa Sidee Xaladaha Aay La kulmaan Dhalinyarada Xaafada Dabaqiin ee Tahriibka Ku Maraan Wadamada Latin America Mu’tamarkii 8aad ee Tawfiiq Islamic Centar »
Date : 2010/03/27